EMD ဖြင့်မည်သည့် TV အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သနည်း။ - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်း
EMD ဖြင့်မည်သည့် TV အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
Created On နိုဝင်ဘာလ 4, 2019
ညာဘက်မျက်နှာပြင်များထားရှိခြင်းသည်သင်၏ display ၏ထိရောက်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်၊ EMD နဲ့ဘယ်လို TV မျိုးသုံးလို့ရမလဲ။
သင်အဓိကအားဖြင့်စျေးနှုန်းကို အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချလျှင်၊ သင်စတင်အသုံးမပြုခင်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုသိထားဖို့လိုသည်။ သို့မှသာသင်တတ်နိုင်သောအရာများကိုသိနိုင်ပြီးသင်၏စျေးနှုန်းအတိုင်းအတာနှင့်မကိုက်ညီသောရွေးချယ်စရာများကိုအချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။
2. သင်၏ display များ၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
လူအများကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် display များကိုအသုံးပြုကြသည်။ အချို့သောအသေးစားစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏စားသောက်ဆိုင်အတွင်း၌မျက်နှာပြင်ငယ်တစ်ခုတွင်သူတို့ menu ကိုပြသကြသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောယေဘုယျအမှတ်တံဆိပ် TV သည်သူတို့နှင့်အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောလိုင်းများနှင့်အနိမ့်ဆုံးအစရှိသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှုသည့်ဖန်သားပြင်များကိုရှာဖွေကြသည်။ မင်းရဲ့ display တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။
သင်၏ display ကို ၂၄/၇ သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်နာရီအနည်းငယ်သာအသုံးပြုမည်လား။ သင်၏ဖန်သားပြင်ကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏လက်လီလက်ထောက်အားမျက်နှာပြင်သက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းပါ။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ LCD ဖန်သားပြင်များသည် plasma display များထက်သက်တမ်းပိုတိုသော်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတိုးတက်မှုများကိုရှာဖွေရန်သင်၏ display လက်လီအရောင်းဆိုင်နှင့်စစ်ဆေးပါ။
4. သင့်ရဲ့ display ကို၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
သင်သည်ရိုးရာရှုခင်းပုံစံကိုရှာဖွေနေသလား၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဖန်သားပြင်အတွက်ပုံတူ orientation ကိုပိုနှစ်သက်ပါသလား။
မင်းရဲ့ display တွေအတွက်နံရံဒါမှမဟုတ်ကြမ်းပြင်ဘယ်လောက်များများခွဲဝေချထားခဲ့ပြီလဲ။
၎င်းသည်သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်အများဆုံးမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ကများပြားသော display များကိုအတူတကွထားရန်စီစဉ်နေပါက screen bezel အရွယ်ကိုလည်းစဉ်းစားပါ။
သင်ပြသမှုအမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေးယူနစ်လိုအပ်ပါသလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၊ သင်နံရံ၊ သို့မဟုတ် projector နှင့် projector မျက်နှာပြင်လိုအပ်ပါသလား။
ဂန္တ ၀ င်တီဗီ ၂၅၀ cd / m²ခန့်ရှိသည်
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မျက်နှာပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အတူ ၃၀၀ cd / m²မှ ၄၀၀၀ cd / m²အထိ Dynamic display screen ။
အထက်ပါမေးခွန်းများအတွက်သင်၏အဖြေများကသင်၏ display medium ၏နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များတွင်လူသိအများဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ LG၊ Samsung နှင့် NEC တို့ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြင်အဆင် - franchise အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာမည့်အလယ်အလတ်တစ်ခု
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များကမည်သို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကိုဥပမာ ၅ ချက်